शिव सत्याल काठमाडौं, २८ कात्तिक
ठगी अभियोगमा डा. रूप ज्योति प्रहरी हिरासतमा छन् । उनीमाथि लागेको आरोपका विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
डा. ज्योतिसहित ज्योति समूहको लगानी रहेको भनिएको ल्याण्डमार्क डेभलपर्सले आफूलाई घर बनाएर दिन्छु भन्दै पैसा लिएको र पछि घर बनाएर दिनुको साटो जग्गा नै अर्कैलाई बेचेर ठगी गरेको आरोप विज्ञेन्द्रकृष्ण मल्लले लगाए । यही आरोपमा मल्लले प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि उनी अहिले अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् ।
को हुन् डा. रूप ज्योति ?
सन् १९४० मा मणिहर्ष ज्योतिले ज्योति समूह स्थापना गरे । सोही समूहका उपाध्यक्ष हुन् डा. रूप ज्योति । ज्योति समूह अहिले व्यापार, उद्योग, सेवा र लगानी क्षेत्रमा संलग्न छ ।
सो समूहको अध्यक्ष अहिले डा. रूप ज्योतिका दाजु पद्म ज्योति छन् । डा. रूप ज्योति समूहको उपाध्यक्ष छन् । ज्योति समूहअन्तर्गत स्याकार कम्पनी, हिमाल आइरन एण्ड स्टील प्रालि, हिमाल वायर्स प्रालि, हिमाल अक्सिजन प्रालि, भाजुरत्न इञ्जिनियरिङ एण्ड सेल्स, स्यामुकापु, सुरुचि ट्राभल्स एण्ड टुर्स, हिमाल एजेन्सिज, ज्योति यार्न प्रोसेसिङ प्रालि र जय स्पिनिङ प्रालि छन् ।
यस्तै, सो समूह बुटवल पावर कम्पनी, सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी र ग्राण्डी अस्पतालमा पनि संलग्न छ । डा. रूप ज्योतिका भतिज सौरभ ज्योति अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी सदस्य छन् ।
डा. रूप ज्योति अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका व्यक्ति हुन् ।
कसरी परे मल्लसँगको झमेलामा ?
ठगीको अभियोगमा उद्योगी डा. रूप ज्योति यतिबेला दरबारमार्ग प्रहरीको हिरासतमा छन् । काठमाडौंका विज्ञेन्द्रकृष्ण मल्लले प्रहरीमा दिएको ठगी अभियोगको जाहेरीका आधारमा उनी २१ कात्तिकमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परे ।
मल्ल र ज्योतिबीचको लेनदेन विवाद लामो समय चल्यो । यो विवाद काठमाडौं जिल्ला अदालत हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेपछि अन्ततः डा. ज्योति पक्राउ परे ।
यस्तो छ घटनाको शृंखला
काठमाडौंका विज्ञेन्द्रकृष्ण मल्ल र डा. रूप ज्योतिको कम्पनीबीचको विवाद २०७१ सालदेखि सुरु भएको हो । मल्लले डा. ज्योतिको परिवार संलग्न रहेको भनिएको ल्याण्डमार्क कम्पनीले काठमाडौंको महाराजगञ्जमा बनाउन लागेको घर खरिद गर्न २ जेठ २०७१ मा १० लाख रुपैयाँ दिए ।
सोही वर्षको १७ भदौमा आफूले कम्पनीलाई थप १ करोड ३६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिएको मल्ल बताउँछन् । आफूले घर किन्न रकम बुझाए पनि तोकिएको समयमा घर नपाएको, आफूलाई बिक्री गरेको भनिएको जग्गा अर्कै कम्पनी खडा गरी बिक्री गरेर डा. ज्योतिले आफूलाई ठगेको उनको आरोप छ ।
अनि अदालतमै पैसा बुझाए डा. ज्योतिले
आफूलाई घर बनाएर दिन्छु भनेर पैसा लिएको तर घर पनि नदिएको भन्दै मल्ल प्रहरीकोमा धाइरहेका थिए । मल्लका अनुसार उनको उजुरी लिन प्रहरी तयार भइरहेको थिएन । मल्लको बुझाइमा डा. ज्योतिले आफूमाथि ठगी गरेका थिए । प्रहरीको नजरमा उनीहरूबीच आपसी लेनदेन थियो ।
प्रहरीले सामान्यतः लेनदेनको विवाद हेर्दैन । मल्ल यो विषय जसरी पनि प्रहरीले हेरिदेओस् भन्ने चाहन्थे । मल्लको धेरै प्रयासपछि प्रहरीले कात्तिक दोस्रो साता २०७५ मा डा. ज्योति, मल्ल र सीई कन्स्ट्रक्सन राखेर छलफल गरायो । सो छलफलमा डा. ज्योतिले मल्ललाई रकम फिर्ता दिने वचन दिए ।
यस्तो छलफल हुँदासम्म मल्लको उजुरी प्रहरीकोमा औपचारिक रूपमा दर्ता भएको थिएन ।
‘छलफल भएकै थियो, उहाँ (डा. ज्योति) ले तिम्रो चित्त बुझाएर पैसा फिर्ता दिन्छु भाइ भन्नुभएको थियो, त्यसैले म पनि ढुक्क जस्तै थिएँ,’ मल्लले भने ।
यो बीचमा मल्ल र डा. ज्योतिबीच कति रकम फिर्ता लिने दिने भन्नेमा सहमति हुन सकेन । डा. ज्योतिले दिन्छु भनेजति पैसा मल्लले लिन मानेनन्, मल्लले बैना गरेको भनिएको जग्गा डा. ज्योतिले दिएनन् । र, मल्लले मागेजति पैसा पनि डा. ज्योतिले दिएनन् ।
विवाद बढ्दै गयो । अनि डा.ज्योतिले १३ मंसिर २०७५ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई १ लाख २६ हजार रुपैयाँ कोर्ट फि तिरेर मल्ललाई दिनुपर्ने १ करोड २६ लाख रुपैयाँ अदालतमा बुझाए । कसैलाई तिर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित व्यक्तिले नबुझेमा अदालतलाई कुल रकमको १ प्रतिशतका दरले कोर्ट फि बुझाएर जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
अनि बल्ल पर्‍याे प्रहरीमा जाहेरी
प्रहरीमा जाहेरी परेको थिएन । मल्ल जसरी पनि ठगी अभियोगमा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराउन चाहन्थे । किनभने डा. ज्योतिले आफ्नो अपेक्षाअनुसार जग्गा वा रकम नदिने मल्लले बुझिसकेका थिए ।
यहीबीचमा १३ मंसिर २०७५ मा डा. ज्योतिले मल्ललाई १ करोड २६ लाख रुपैयाँ बुझाई पाऊँ भन्दै अदालतमा थैली झुण्ड्याए ।
डा. ज्योतिले अदालतमा थैली झुण्ड्याएको ३ दिनपछि अर्थात् १६ मंसिर २०७५ मा मल्लले डा. ज्योतिविरुद्ध प्रहरीमा ठगी अभियोगमा किटानी जाहेरी दिए । डा. ज्योतिले अदालतमा झुण्ड्याएको रकम मल्लले लिएनन् ।
डा. ज्योतिविरुद्ध प्रहरीमा ठगीको जाहेरी परेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा हाल्यो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले २० मंसिर २०७५ मा पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो । जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ आदेशविरुद्ध डा. ज्योतिले सर्वाेच्च अदालतमा निषेधाज्ञा (जिल्ला अदालतको पक्राउ आदेश खारेज गर्न माग गरिएको) को निवेदन दर्ता गरे ।
डा. ज्योतिको सो निवेदन सर्वाेच्चले गत १८ कात्तिकमा खारेज गरिदियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको इजलासले जिल्ला अदालतको पक्राउ गरी ज्योतिमाथि अनुसन्धान गर्नु भन्ने आदेश खारेज गरेन । सो आदेशको पूर्णपाठ भने सर्वाेच्चले उपलब्ध गराएको छैन ।
यसरी सर्वाेच्च अदालतले जिल्लाको आदेश सदर हुने आदेश गरेपछि सोही आदेशलाई टेकेर प्रहरीले डा. ज्योतिलाई २१ कात्तिकमा पक्राउ गरेको हो । डा. ज्योति सो दिन साँझ सिंगापुरबाट नेपाल फर्कदै थिए ।
को हुन् विज्ञेन्द्रकृष्ण ?
२१ कात्तिक साँझ प्रहरीले डा. ज्योतिलाई पक्राउ गरेको सनसनीपूर्ण समाचार सार्वजनिक भयो । डा. ज्योतिविरुद्ध काठमाडौंका विज्ञेन्द्रकृष्ण मल्लले जाहेरी दिएको समाचार त्यति चर्चामा आएको थिएन । र, डा. ज्योति र उनको परिवारविरुद्ध जाहेरी दिने मल्ल को हुन् भन्ने पनि खुलेको थिएन ।
शिलापत्रले २२ कात्तिकमा मल्लसँग टेलिफोन सम्पर्क गरी समाचार बनाएको थियो । सो समाचार बनाउँदासम्म मल्ल को हुन् भन्ने खास परिचय खुलेको थिएन ।
डा. ज्योति प्रहरी हिरासतमा नै थिए । यहीबीचमा २५ कात्तिकमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको डा. ज्योतिका दाजु पद्म ज्योतिविरुद्ध पनि पक्राउ आदेश दिएको समाचार सार्वजनिक भयाे । पद्म ज्योति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । र, ज्योति समूहका अध्यक्ष पनि ।
पद्म ज्योतिविरुद्ध पक्राउ आदेश जारी भएसँगै अर्काे पनि तथ्य खुल्यो । यसअघि नै डा. ज्योति र उनकी छोरी सुरुचि पक्राउ परिसकेका थिए । ज्योति परिवारका ११ जनाविरुद्ध नै मल्लले ठगीको अभियोगमा जाहेरी दिएको र परिवारका सबै सदस्य पक्राउ पर्न सक्ने अर्काे सम्भावना देखियो ।
ज्योति समूहजस्तो प्रभावशाली व्यावसायिक घरानाका सबै सदस्यलाई प्रहरी खोरमा हाल्न सक्ने, अभियोग लगाउन सक्ने क्षमता राख्ने मल्ल को हुन् भन्ने प्रश्न फेरि बलियोसँग उठ्यो । एउटा अपार्टमेन्ट किन्न बैना गरेको एक उपभोक्ताले त्यति ठूलो व्यावसायिक घरानालाई हाराबारा पार्न सक्ला भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिँदैनथ्यो ।
यही प्रश्नका बीच हामीले २६ कात्तिकमा मल्लसँग फरि सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्‍याैं । तर, उनको मोबाइल स्वीच अफ थियो । प्रहरीसँग बुझ्दा प्रहरी पनि उनीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयासमा रहेको तर नसकेको जानकारी प्राप्त भयो ।
अनि मनमा प्रश्न थपियो–कहाँ गए मल्ल ?
तर, २७ कात्तिकमा मल्लसँग सम्पर्क भयो । सो दिन बिहानैदेखि मल्ल टेलिफोन सम्पर्क थिए । तर, भेट्न खोज्दा ‘२ घण्टा पछि है’ भन्दै थिए । र, बेलुका ५ बजेतिर उनले २ घण्टापछि महाराजगञ्जमा भेट्ने भने ।
मल्लले बोलाएको स्थानमा साँझ ७ बजेतिर शिलापत्रकर्मी पुग्यौं । उनी आइपुगेका थिएनन् । सवा ७ बजेतिर मल्ल आए । उनलाई चिनेको पनि थिएन । निलो डाउन ज्याकेट लगाएका, गोरो अनुहार भएका, कपाल अलिअलि खुइलिएका व्यक्ति तोकिएको ठाउँमा आए । र, आफू नै विज्ञेन्द्रकृष्ण मल्ल भएको जानकारी दिए ।
कालो चिया खाँदै कुराकानी सुरु भयो । उनीमाथि विभिन्न शंका र प्रश्नहरू पनि थिए । उनी सबै प्रश्नको जवाफ दिन र आफ्नो सबै परिचय दिन तयार भए ।
‘हाम्रो परिवार सानोतिनो व्यवसायमा संलग्न थियो, हामी ५ जना दाजुभाइ थियौं, मेरो जेठा दाजु र डा. रूप ज्योति धेरै राम्रो सम्बन्ध भएको मिल्ने साथी हुन्,’ मल्ल भन्न लागे ।
मल्लका अनुसार उनको परिवार पछि विस्तारै हार्डवेयर व्यवसायमा संलग्न भयो । तर, डा. ज्योतिसँगको विवादका कारण उनको सो व्यवसाय पनि विग्रियो । अहिले उनी पार्टी प्यालेस व्यवसायमा संलग्न छन् । उनको पुरानो घर गल्कोपाखा हो । मल्लले सिद्धार्थ वनस्थली स्कूल पढेका हुन् ।
राष्ट्रपतिलाई पनि भेटे
मल्लले डा. ज्योतिविरुद्ध ठगी अभियोगमा जाहेरी दर्ता गराउन नसकेपछि शक्तिकेन्द्र धाएको खुलाए ।
‘प्रहरीले जाहेरी लिनै मानेन, डा. ज्योतिले मलाई ठगेका थिए, यो कुरा मैले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र गृहमन्त्रीसम्मलाई भेटेर भनें, उहाँहरूले सहयोग पनि गरिदिनुभयो, गृहमन्त्रीले प्रहरी हेडक्वार्टरमा पत्र नै लेखेर यो ठगी मुद्दाको जाहेरी प्रहरीले किन नलिएको भनेर सोध्नुभएको थियो, त्यसपछि मात्रै प्रहरीले जाहेरी लिएको थियो,’ मल्लले भने ।
पद्म ज्योतिप्रति सद्भाव
मल्लले डा. रूप ज्योतिसहित परिवारका ११ जना सदस्यविरुद्ध नै ठगीको जाहेरी दिएका भए पनि पद्म ज्योतिप्रति भने सद्भाव देखाए ।
‘भाइ (डा. रूप ज्योति) ले गरेको बद्मासी दाजुलाई थाहा थिएन, उहाँ त्यस्तो मान्छे पनि होइन, प्रहरीले पद्म दाइको पनि पक्राउ पुर्जी पाएको छ, उहाँ जस्तो सम्मानित व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ला कि भन्ने चिन्ता छ, तर के गर्नु ? भाइले गरेको कर्मको फल दाजुले पनि भोग्नुपर्लाजस्तो देखियो,’ मल्लले भने ।
व्यवसायी संस्थाको धारणापछि हच्किए मल्ल
डा. रूप ज्योति हुँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पद्म ज्योतिलाई पनि प्रहरीले पक्राउ पुर्जी पाएपछि व्यवसायीहरूका संस्थाले आपत्ति जनाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन जस्ता संस्थाले ज्योतिविरुद्ध राज्यले दुर्व्यवहार गरेको आशयको वक्तव्य जारी गरे ।
यस्तो वक्तव्यपछि मल्ल केही चिन्तित देखिएका छन् । प्रतिष्ठित व्यवसायीविरुद्ध संगठित आक्रमण सुरु भएको र यसको कारक आफू बनेको भन्ने सन्देश प्रवाह भएको उनको बुझाइ छ ।
‘मैले न्याय मागेको हुँ, डा. रूप ज्योतिले ममाथि अन्याय गरेका छन्, तर यहाँ त प्रतिष्ठित व्यवसायीमाथि नियोजित आक्रमण भएको र म कारक बनेको जस्तो गरी प्रचार हुन थालेको छ, यस्तो होइन,’ मल्लले सुनाए ।
मल्लको बुझाइमा डा. ज्योतिले आफूलाई हेपेका छन् । मान्छे नै गनेनन् । त्यही कारण बाध्य भएर उनी यो हदमा उत्रनुपरेको छ ।
‘मलाई मान्छे नै गनेनन्, मान्छेसँग गर्नुपर्ने व्यवहार नै गरेनन्, त्यसैले एउटा सामान्य मान्छेले जे गर्नुपर्थ्याे वा जे गर्न सक्थें, मैले त्यही गरेर देखाइदिएको हुँ, यसको पछाडि अरु केही कारण छैन,’ मल्लले भने ।
फोटो खिच्न दिएनन्
मल्लसँग यो विषयमा कुरा गर्दा रातको सवा ९ बजिसकेको थियो । जस्तासुकै प्रश्न गरे पनि उनी जवाफ दिँदै थिए । तर, उनले फोटो खिच्न भने दिएनन् ।
अहिले उनी यो मुद्दाको सहज निकास चाहन्छन् । ज्योतिका सबै परिवारलाई प्रहरीले पक्राउ गरे अनर्थ हुने उनको पनि बुझाइ छ ।
‘मैले न्याय मागेको हुँ, न्याय पाउनेबित्तिकै यो विषय सकिन्छ, मैले बैना गरेको जग्गा दिए हुन्छ, त्यो नसके त्यसैको आसपासमा त्यति नै जग्गा दिए हुन्छ, त्यो पनि नसके एउटा उचित अंक रकम मलाई दिए हुन्छ, २०७१ सालमा दिएको १ करोड २६ लाख रुपैयाँ नै अहिले बुझ भनेर म मान्दिनँ,’ मल्लले आफ्नो बटमलाइन सुनाए ।
यो सामग्री तयार पार्दासम्म मल्लले ज्योतिविरुद्धको जाहेर फिर्ता लिने प्रक्रियामा गइसकेको छ । मल्लले नै फिर्ता प्रक्रिया सुरू भएको शिलापत्रलाई जानकारी दिएका छन् ।
पद्म ज्योतिसहित परिवारलाई नै पक्राउ गर्न अदालतको आदेश
अदालतमा रुप ज्योतिको प्रश्न: मेरो दोष के हो श्रीमान् ?
उद्योगी ज्योतिमाथि प्रतिशोध साँधिएको भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
रूप ज्योतिका खराब दिनः पैसा तिर्न पाऊँ भनेर अदालत धाउँदा पनि जेलको बास
अदालतमा पैसा बुझाएको ३ दिनपछिको जाहेरीले पक्राउ परे रुप ज्योति
विज्ञेन्द्रले फिर्ता लिए डा. रूप ज्योतिविरुद्धको जाहेरी
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २८, २०७६, १४:३१:००
सरिता गिरीको सट्टा लिला सिटौला !